iLotho yase Mzansi Afrika | Mzansi Afrika Daily Lotto Kanye ne PowerBall
Imidlalo ye lotho
Sifakwa kanjani isicelo sokucela umklomelo
Uyakuphi ukufaka isicelo somklomelo
Thola imiphumela emisha ye lotho ububanzi yemidlalo, kufaka phakathi i Lotto, Daily Lotto Kanye ne PowerBall , ku Lottery.co.za Hlola izinombolo eziwinayo namhlanje ukuze ubone ukuth akusiwena na one onethikithi eliwinayo futhi thola ulwazi olubanzi mayelana nelotho ejabulisayo yase Mzansi Afrika enikela ngayo.
Daily Lotto Imiphumela - Isonto, 26 UNhlangulana 2022
Ngaphezulu ka 60811
abawinile kulo khetho! Buka Daily Lotto imiphumela
izinsuku0 amahora7 imizuzu22 zuzwana29
Dlala PowerBall onilayini
izinsuku1 amahora0 imizuzu22 zuzwana29
Imiphumela ye lotho
Iba owokuqala othola imiphumela emisha ye lotho. Angawabona asanda kuphuma imiphumela yezinombolo eziwinayo ze Lotto, PowerBall, Daily Lotto futhi nokuningi, ngoshesha uma isidlalile I lotho.
Imiphumela esanda kuphuma
Daily Lotto umdlalo osanda kuba khona e Mzansi Afrka, Lapho yonke imiklomela ikhokhela njalo uma sekudlaliwe! Uma kungekho muntu othola zonke izinombolo ezinhlanu emdlalweni, umklomelo udlulela kumdlalo olandelayo kunokuba iqale phansi. Ithikithi libiza u R3 umdlalo ngamunye futhi uyakwazi nokubona imiphumela emisha ye Daily Lotto ngo 21:00.
Sebenzisa lezi nombolo ezizenzakalelayo ukuthola ukuba uwine ngokushesha imiklomelo ye lotho:
Noma ngabe ufuna ukwazi izindlela einingi zokudla, jekhiphothi enkulu yabawinayo noma ufuna ukufaka isicelo sokuthola umklomelo, ungafunda konke odinga ukukwazi ngemidlalo ye lotho yase Mzansi Afrika lapha.
Ulwazi oluningi ›
Iziluleko zokudlala ilotho
Hlola lezi ziluleko zokudlala ilotho – ziwusizo noma uyiqhawe yomdlalo noma ngabe umusha kwi lotho.
Iziluleko zokudlala ›
Imiphumela yanamuhla ye UK49's
Lunchtime: Isonto, 26 UNhlangulana 2022
Teatime: Isonto, 26 UNhlangulana 2022
Dlala onilayini ukuze uhole ithuba loku wina umklomelo omkhulu we lotho yase Mzansi Afrika, noma uthathe ithuba emdlalweni we lotho yamazwe wonke!
Dlala onilayini ›
Okumele ukwenze uma uwina ilotho
Uma kuwena obe nenhlanhla yokuwina okukhulu – kodwa yini okulandelayo? Thola ukuthi yini okumele ukwenze uma usuwinile ilotho.
Okumele ukwenze uma usuwinile ›
Impahla amalungelo okukopisha © 2022 Lottery.co.za
Mayekana nathi Xhumana nathi Imikhonyovu yelotho Nesitatimende Imephu
Okuqukethwe futhi nokusebenza kwale webhusayithi akuzange kuvunyelwe I Ithuba Holding RF Limited noma ilotho kazwelonke ikhomishini ya Mzansi Afrika.